Disroot - အွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အခမဲ့၊ Linux မှ
Disroot - အွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အခမဲ့၊
မကြာသေးမီကငါတို့ခေါ်ဆောင်းပါး၌တည်၏ GAFAM versus Comunidad del Software Libre: Control o Soberanía ငါတို့အချို့ဖော်ပြထားသည် အသုံးဝင်သောအက်ပ်များ de la «Comunidad de Software Libre»အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းမှုအပြင်လုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုအဆင့်အတန်းကိုလည်းပေးသည်။ ထိုသူတို့အထဲ၌ရှိ၏ «Disroot».
«Disroot» es, စပိန်ဘာသာဖြင့်၎င်း၏တရားဝင် site ကိုကိုးကား: "una အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းပလက်ဖောင်းလွတ်လပ်မှု၊ သီးသန့်တည်ရှိမှု၊ ဖက်ဒရယ်နှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးအခြေခံမူများကိုအခြေခံသည်"။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်လာသည်ဟုလည်းဖော်ပြထားသည်။ trackers မရှိ၊ ကြော်ငြာမပါ၊ profiling မရှိ၊ data mining မရှိပါ။
"Disroot သည်အမ်စတာဒမ်အခြေစိုက်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီးစေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများမှထိန်းသိမ်းထားပြီး ၄ င်း၏ရပ်ရွာလူထု၏ပံ့ပိုးမှုအပေါ်မူတည်သည်".
«Disroot» မူရင်း developer များမှဖန်တီးထားသောအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့နှင့်အခြားသူများကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သော site တစ်ခုရရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဆက်သွယ်, မျှဝေနှင့်စုစည်း။ ထိုကဲ့သို့သောနည်းဖြင့်၊ ဤအပလီကေးရှင်းများသည်ဖြစ်ခြင်း၏နိယာမများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ပွင့်လင်း, ဗဟို, ဖက်ဒရယ် နှင့်လေးစားမှု လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှု။
ဒါနဲ့သူတို့စတင်ခဲ့တယ် «Disroot». အဓိကအားဖြင့်ကိရိယာများကိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်ရှိပြီးသားစီမံကိန်းများကိုတစ်နေရာတည်းတွင်သက်ဝင်စေခြင်းဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းများထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည် အကျိုး de la «Comunidad del Software Libre» နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အခြားစိတ်ဝင်စားပါတီများ။
«Disroot» လူအများဝဘ်ပေါ်တွင်လူတို့အများအားဖြင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲလိုသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်လူအများအတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုဖြစ်စေလိုသည်။ အွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ အဓိကအားဖြင့်ဆက်သွယ်ရေး၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင်စီးပွားဖြစ်နှင့်ပိတ်ထားသောဆော့ဝဲလ်ကိုရိုးရာအသုံးပြုမှုကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ အဖြစ် «Disroot» ၎င်းသည်ပြည်သူလူထု၏အကျိုးကိုသာအာရုံမစိုက်ဘဲအမှန်တကယ်လွတ်လပ်သောရရှိနိုင်သည့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
1.1.1 ခြေလှမ်း 1
1.1.2 ခြေလှမ်း 2
1.1.3 ခြေလှမ်း 3
1.1.4 ခြေလှမ်း 4
1.1.5 ခြေလှမ်း 5
မှာအကောင့်ဖွင့်ရန် «Disroot»ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အဆင့်တွေ -
ဖွင့်ပါ စပိန်ဘာသာဖြင့်တရားဝင်ဆိုဒ် ငါတို့အတွက် «Navegador web»။ အပိုင်းသို့သွားပါ «Servicios» ပြီးတော့သူတို့ထဲကတစ်ခုခုကိုနှိပ်ပါ။ ငါတို့ရဲ့နမူနာအတွက်ပထမခေါ် option ကိုရွေးပါမယ် «Correo»။ ဤအပိုင်းသို့မဟုတ်အခြားဖွင့်လှစ်ပြီးတာနဲ့ခလုတ်ကိုခေါ် «InscribirseaDisroot».
ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက် «InscribirseaDisroot»ကျနော်တို့တစ် ဦး နှင့်အတူတင်ပြကြသည်«Formulario de Registro» ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရမယ်၊ ပြီးရင်အဆုံးမှာခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ «Continuar»။ ဤပုံစံတွင်အောက်ပါကွက်လပ်များပေါ်လာလိမ့်မည် -
အသုံးပြုသူအမည်: အက္ခရာစာလုံးအသေးများနှင့်နေရာများမရှိပဲ A ကိုမှ Z သို့ without၊ နံပါတ်များနှင့်ကာလများမပါရှိနိုင်ပါ။
ဖော်ပြမည့်အမည်: Username တွင်အသုံးပြုသည့်အတိုင်းအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါ။
အတည်ပြုရန်မေးခွန်း: အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုစာလုံးအနီဖြင့်ရေးသား။ အက္ခရာ ၁၅၀ နှင့်အများဆုံးစာလုံးရေ ၂၅၅ လုံးဖြင့်ရေးသားရမည်။
စကားဝှကိအသစ်: မှတ်ပုံတင်ပုံစံတွင်ဖော်ပြထားသောရှင်းလင်းပြတ်သားသောလိုအပ်ချက်များကိုလိုက်နာ။ မည်သည့်အရာကိုဖန်တီးရမည်နည်း။
ပြီးတာနဲ့ဖိ ခလုတ်«Continuar»စာဖြင့်ရေးသားထားသောအီးမေးလ်လိပ်စာသို့အီးမေးလ် ၂ ခုရောက်ရှိမည်။ စင်မြင့်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းသတင်းစကားနှင့်တစ်ခု စိစစ်အတည်ပြုကုဒ် အရာထို့နောက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်ဖို့လာမည့်မှတ်ပုံတင်မျက်နှာပြင်တွင်ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်သည်ကုဒ်ကိုအောင်မြင်စွာအတည်ပြုပြီးကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ခလုပ်ကိုခေါ်သည့်အကြောင်းကြားရန်နောက်ထပ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုပြီးဆုံးသွားသည် «Continuar».
ပြီးတာနဲ့ဖိ ခလုတ် «Continuar»နှင့်အတူပြတင်းပေါက်အသစ်တစ်ခုပေါ်လာမည်«Términos del Servicio», ကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးလက်ခံရမယ်၊ I accept လို့ခေါ်တဲ့ checkbox ကိုမှတ်သားပြီး၊ ထို့နောက်ခေါ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ «Continuar»။ အဆုံးမှာအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ် (https://apps.disroot.org/) ငါတို့အားလုံးကိုပြသခြင်း ရရှိနိုင်သောဝန်ဆောင်မှုများ (application များ) ပလက်ဖောင်း၏ «Disroot».
အပိုင်းမှာတော့ စကားဝှက် အသစ်တစ်ခုကိုပြတင်းပေါက်ကျွန်တော်တို့ကိုပုံပေါ်ပါတယ်«Inicio de Sesión»ငါတို့မိတ်ဆက်ရမယ်ဘယ်မှာ «Usuario y Contraseña» ပလက်ဖောင်းသို့ log ရန်ဖန်တီးခဲ့သည် «Disroot»။ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုစီသို့လည်းတိုက်ရိုက်သွားနိုင်သည်။ ပေးထားသောဝန်ဆောင်မှုများကို ၀ င်ရောက်အသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အများဆုံးကာလကိုစောင့်ရမည် အလုပ်ချိန် ၄၈ နာရီ သို့မဟုတ်အီးမေးလ်မှတဆင့်ပလက်ဖောင်းကကျွန်ုပ်တို့အား၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားပြီဟုပြောသည့်အချိန်အထိ။
တစ်ချိန်က၏ပလက်ဖောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့မြင်နိုင်သနည်း «Disroot» အောက်ပါအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများရှိသည် -
တိမ် (တိမ်) Cloud သိုလှောင်ရေးလုပ်ငန်း
ဖိုရမ် - လူထုဖိုရမ်ခန်း။
ချက်တင် (XMPP) Community Chat Room ။
Etherpad (လုပ်ကွက်များ) ဝဘ်ဘရောက်ဇာတွင်အချိန်နှင့်တပြေးညီပူးပေါင်းပါ ၀ င်မှုတည်းဖြတ်ခြင်း။
အီသရက် (တွက်ချက်မှု) ဝဘ်ဘရောက်ဇာတွင်အချိန်နှင့်တပြေးညီစာရင်းဇယားများကိုပူးပေါင်းတည်းဖြတ်ခြင်း။
Privatebin (Bin) အွန်လိုင်းနှင့်အရက်ဆိုင်၊ ဆွေးနွေးခြင်းဘုတ်အဖွဲ့၊ အနည်းဆုံးနှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်။
တင်ယူပါ: လင့်များမှတဆင့်မျှဝေဖို့ယာယီဖိုင် hosting ဝန်ဆောင်မှု။
SearX- SearX Meta-search engine ကို သုံး၍ ရှာဖွေခြင်းဝန်ဆောင်မှု
Polls (Polls): Framadate အခြေပြုချိန်းဆိုမှုစီစဉ်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဝန်ဆောင်မှု။
စီမံကိန်းဘုတ်အဖွဲ့ (Taiga): စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာ။
စကားဝှက် စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန် (သို့) ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်နှင့်အသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစီမံရန်စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်း။
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်း «Disroot» အလွန်အသုံးဝင်သောအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဒီဂျစ်တယ်ဘဝအတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုထားသောကြောင့်၎င်းတို့အားလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဤသို့သောနည်းလမ်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တန်ဖိုးရှိသောတိုးတက်သောပြောင်းရွှေ့မှုသို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်သည် «espacios más libres, seguros, privados y confiables»ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ «Comunidad del Software Libre».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Disroot - အွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အခမဲ့၊
Linus Torvalds တွင် Linux Kernel ဌာနခွဲ 5.4 အတွက် dm-clone ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်
ဒါက Albert Rivera ရဲ့ WhatsApp အကောင့်ကိုပြန်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပါ